Yila igumbi lokuhlambela ekhaya ukuze ube Mhle kwaye ube neMood elungileyo kwiShower Yonke imihla
Ikhaya / Blog / Yila igumbi lokuhlambela ekhaya ukuze ube Mhle kwaye ube neMood elungileyo kwiShower Yonke imihla
2021 / 01 / 11 uhleloBlog 7693 0
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-23
Igumbi lokuhlambela njengendawo esetyenziswa rhoqo ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Kuyilo, ukuba awukhangeli mhle, ixesha, uya kuziva ungonwabanga. Ke unika njani igumbi lokuhlambela ukuze libe lihle ngakumbi? Ndabelana ngamatyala ayilo lwexabiso lokuhlambela axabisekileyo kuwe namhlanje, ndiyathemba ukuba unganako nokuba nomoya olungileyo yonke imihla yokuhlamba.
Uyilo lwethoni engwevu luthandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo. Igumbi lokuhlambela ekhaya ngoku linokuhonjiswa ngethayile engwevu, kunye nempahla emhlophe namnyama ethambileyo kunye nempahla yococeko, ibukeka isencinci kwaye inesisa.
Unokongeza ukhuni, ipinki, njl.nendawo kwindawo engwevu njenge toner ukunqanda inkqubo grey ngokubanzi ijongeka imfiliba ezinye, iinkcukacha zenza umsebenzi olungileyo zinokwenza igumbi lokuhlambela libe lihle ngakumbi.
Umdibaniso woyilo omnyama nomhlophe ulunge kakhulu kwisitayile sangoku, isitayile esincinci, kunye nomhlaba ojikelezayo weethayile ezinamacala ukwandisa umbono wendawo yendawo yangasese, ukuze igumbi lokuhlambela likhangeleke ngakumbi.
Iithayile zemarble lukhetho lwabanini makhaya, kwaye iithayile zemarble nazo ziza kwiipateni ezahlukeneyo kunye nee-shades, ezinokugqitywa ngokokukhetha kwakho. Izinto zentsimbi zinokongezwa ukwenza igumbi lokuhlambela libukeke lisesibhakabhakeni.
Ezinye iithayile zokuyila ezijijekileyo zinokwenza igumbi lokuhlambela libukeke linomdla ngakumbi, kodwa kwaye ukunqande ukungabonakali kuxinene, ukhetho lwethoni lubaluleke kakhulu.
Yongeza iithayile zeentyatyambo ezimnandi njengezitayile kwigumbi lokuhlambela elilula nelinesisa. Ukubeka indawo yokuhlamba kunye nomgangatho kunye neethayile zentyatyambo ezenziwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwenza ukuba igumbi lokuhlambela likhangeleke njengoncwadi.
Igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo ekhaya linokukhetha ukwenza isinki ngaphandle komnyango wegumbi lokuhlambela, ukuze ibe lula ngakumbi ukusetyenziswa kwemihla ngemihla. Kwaye isinki ngokuzimela ngaphandle kwegumbi lokuhlambela, kodwa ikwadlala nefuthe lokuhombisa.
Indawo yokuhlambela yanele, ngoku unokuyila ngokwahlukeneyo. Yahlula indlu yangasese, isinki kunye nendawo yokuhlamba, kwaye yongeza isahlulelo esihle sokwenza igumbi lokuhlambela libukeke lihle ngakumbi.
Emva kokujonga kula matyala ayiliweyo, ngaba kufuneka ufumane eyakho oyithandayo? Ndicinga ukuba uyilo lwegumbi lokuhlambela linokumiselwa ngokwesitayile sendlu, umzekelo, ithoni engwevu yegumbi lokuhlambela ilunge kakhulu kwisitayile esincinci kunye nesaseScandinavia. Uyilo lwepavumente yemarmore ilungele isitayile samanje nesaseYurophu. Landela isimbo ayiyi kwenza igumbi lokuhlambela likhangeleke ngokungalunganga.
Ngaphambili :: Unokwenza njani ukuba i-Shower ivaliwe kwakhona? Sukungxama! Yisebenzise Ukucwina… Ummangaliso! Khawuleza uxelele abaThengi bakho! next: Ubusika Bufikile! Ngaba ndifanele ndiyithenge i-Thermostatic Shower? Mamela kwiiNgcali, akumangalisi ukuba abantu abaninzi bafune ukutshintsha !!!
Nokuba igumbi lokuhlambela lingaphantsi kweemitha ezi-5 zesikwere, indawo emanzi kunye neyomileyo yi-N ...
Ubusika Bufikile! Ngaba ndifanele ndiyithenge i-Thermostatic Shower? Mamela kwiiNgcali, Hayi ...
Unokwenza njani ukuba i-Shower ivaliwe kwakhona? Sukungxama! Yisebenzise ukuntywila ... ...